အနှစ်သုံးဆယ်ပြည့် ပုလဲရတုမှသည် ရွှေရတု၊ စိန်ရတု တိုင်အောင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » အနှစ်သုံးဆယ်ပြည့် ပုလဲရတုမှသည် ရွှေရတု၊ စိန်ရတု တိုင်အောင်
အနှစ်သုံးဆယ်ပြည့် ပုလဲရတုမှသည် ရွှေရတု၊ စိန်ရတု တိုင်အောင်
Posted by etone on Feb 4, 2012 in My Dear Diary | 48 comments
လေးပေါက်ကြီးအတွက် ပုလဲရတု ဆုတောင်း
အာပွား .. လာထား ..ဟီး ဟီး
အပြောင်းလဲ မြန်တဲ့ ဒီခေတ်ကြီးထဲ အိမ်ထောင်တစ်ခု ပြုဖို့ဆိုတာ လွယ်ကူတဲ့ ကိစ္စတော့ မဟုတ်ဘူး …. အခုခေတ်လူငယ်တစ်ချို့ …. အတုယူကောင်းစွာနဲ့ အတတ်စမ်းရင်း ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်မှာပဲ အိမ်ထောင်ကျကျကြတယ် … ။ သေချာ စဉ်းစား တည်ဆောက်ထားတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးမျိုးမဟုတ်ပဲ ရေတတ်ငါးဇင်ရိုင်းလို အချစ်တွေကြွနေတဲ့ အရွယ်မှာ ယူလိုက်ကြတော့ …. အခက်ခဲ တစ်စုံတစ်ရာ နဲ့ ရင်ဆိုင်ရတဲ့ အခါ တွေ့မြင်နေကြ ရုပ်ရှင်ထဲကလို လှလှပပ အချစ်ဇာတ်လမ်းမျိုးမဟုတ်တော့ပဲ … စလယ်ဝင်အိုး ဖင်မည်းခင်ကတည်း က လင်မယားကွဲခဲ့ကြတယ် … ။
အိမ်ထောင်တစ်ခု တည်မြဲ ဖို့ဆိုတဲ့ နေရာမှာ အချစ်တစ်ခုတည်းနဲ့ မပြီးသေးပါဘူး ။ စီးပွားရေးအခြေနေ ၊ အိမ်ထောင်ဘက်ရဲ့ နားလည် နိုင်မှုနဲ့ … ကျွမ်းကျင် လိမ္မာစွာ စီမံခန့်ခွဲတတ်မှုတို့ အပြင် ၊ စဉ်းစား ဆင်ခြင် ဥာဏ် ရှိမှု တို့ပေါ်မှာ မူတည်ပြီး မလျှော့မတင်းတဲ့ ဆက်ဆံရေးမျိုးနဲ့ တစ်လှည့်စီအားပေးကူညီရင်း ရှေ့ဆက်သွားကြတာမျိုးပါပဲ … ။
အသွင် မတူ အိမ်သူ မဖြစ် ဆိုတဲ့ စကားအတိုင်းပဲ ။ မိမိရဲ့ အိမ်ထောင်ဖက်ဟာ သဘောထားသေးသိမ်သူ ၊ အယူအစွဲပြင်းထန်သူ ၊ စိတ်ဓါတ် နိမ့်ကျသူမျိုးသာဆိုလျှင် ပျော်ရွင်ဖွယ်ရာအိမ်ထောင်တစ်ခု ဖြစ်လာတော့မှ မဟုတ်ပါဘူး … ။
အနှစ်သုံးဆယ် လုံးလုံး အိမ်ထောင်တစ်ခုကို အပေးယူမျှတစွာဖြင့် နားလည်မှုတွေမျှရင်း တည်ဆောက်ထားတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကို ကျွန်မဖြင့် မချီးကျူးပဲကို မနေနိုင်တော့ပါဘူး ။ ချစ်ခြင်း မေတ္တာအပြင် ၊ သံယောဇဉ်လေးတွေပါ အထပ်ထပ်ဖွဲ့နှောင်ထားတဲ့ ဒီလို ပျော်စရာအိမ်ထောင်ရေးမျိုး အိမ်ထောင်ရှင်တိုင်းကို ရှိစေချင်ပါတယ် … ။
ဒီလောက် အထိမ်းစောင်းမခံတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကို ၊ ပျော်ရွင်နွေးထွေးစွာ အနှစ်သုံးဆယ်တိုင် ကျော်ဖြတ်လာသူ တစ်ယောက် ကျွန်မတို့ ရွာလေးထဲမှာ ရှိပါတယ် …. ။ ဘယ်သူလို့ ထင်ကြပါလဲ ………
စနက်ရှော့မဟုတ်ဘူး လက်ဆော့ ဆိုတဲ့ အသံကြားလျှင် ဘယ်သူမှန်းလဲ … သိကြမှာပါ …. ။ ဟုတ်ပါတယ် …. ကိုပေါက် (မန္တလေး) ပါပဲ … ။
မနက်ဖြန် 5ရက်နေ့ဟာ လေးပေါက်ကြီးနဲ့ မဒမ်ပေါက်တို့ ရဲ့ အိမ်ထောင်သက် သက် အနှစ် (၃၀)ပြည့် ပုလဲရတုနေ့လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ် …. ။
နားလည်မှုများစွာနဲ့ လျှောက်လှမ်းခဲ့ရတဲ့ လေးပေါက်နဲ့ မဒမ်ပေါက်တို့ရဲ့ ပုလဲ ရတုနေ့လေးမှသည် ရွှေရတု ၊ စိန်ရတုတိုင်အောင် ပျော်ရွင်နွေးထွေးစွာနဲ့ လျှောက်လှမ်း နိုင်ကြပါစေလို့ …. ဒီပို့စ်လေးနဲ့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော် … ။
လေးလေးပေါက်ကို လူပျိုကြီးလို့ထင်နေတာ အော်အော် အိမ်ထောင်သက် တောင်ဒီလောက်ရနေပါလား..
ကျနော်အစောကြီးထဲ က မဒမ်ပေါက်ရှိကြောင်း ကြေညာပေးထားပါ၏။